Nandrasana tao amin’ny biraon’ny tale provinsialin’ny polisy tao an-toerana ny nofo mangatsiakan’izy ireo ary avy eo dia nalefa any Mahanoro ny inspektera Abdi, Antananarivo ny inspektera Haja ary nijanona ao Toamasina ihany ny inspektera Briand. Tsy maintsy hatao ny fanadihadiana lalina mikasika ity raharaha ity, hoy ny talem-paritry ny polisim-pirenena ao Toamasina.
SAVOROVORO TANY VAVATENINA
Nosaritahan’ny olona koa ny kaomisarian’ny polisy ao Vavatenina. Izany dia mba hijeren’izy ireo ny jiolahy iray izay azo sambo-belona ka hamonoana azy avy hatrany. Rehefa tsy tao amin’ny polisy ilay olon-dratsy dia nirodorodo tany amin’ny zandary indray ny fokonolona marobe. Teo dia voatery nanao tifi-danitra ny zandary nanaparitahana ny olona. Naharitra adim-pamataran’andro roa izany vao nilamina ary niditra an-tsehatra hatramin’ny Ben’ny tanàna.
MPANAO TRAFIKANA SOKATRA
Notsaraina omaly ireo mpanondrana sokatra voasambotra tao Toliara tamin’ny volana aprily lasa teo. Enin-taona sazy an-tranomaizina ny didy navoakan’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toliara omaly, miaraka amin’ny fandoavana onitra izay mitentina 100 tapitrisa ariary. Raha tsiahivina dia sokatra miisa 10.000 mahery no sarona tao an-tranon’ireo olona ireo. Io izany no sazy mafy indrindra hatreto, momba ny fanondranana sokatra.
Amin’ny alatsinainy ho avy izao no hiakatra fampanoavana ilay raharaha nitorian’ny mpanjifa restaurant Thailandais iray etsy Ankorahotra. Izany dia noho ny fanomezan’ilay toeram-pisakafoanana ranom-boankazo izay efa lany daty ireo olona. Avy hatrany dia novakian’ny tompon’ilay hotely ny tavoahangy raha saika haka sary ireo narary mba hatao porofo. Fanambaniana tanteraka ny mpanjifa ary indrindra koa ny gasy no zava-niseho. Baranahiny tanteraka ny sehatra toy itony satria tsy mba misy ny fanaraha-maso matotra avy amin’ny fanjakana.
Naka olon-tsotra amin izay ny bianco hanao famotorana fa tsy niantehatra amin'ny polisy sy ny zandary irery intsony. Andramana avokoa ny fomba rehetra ahafahana miady amin'ny kolikoly, hoy ny tale jeneralin’ny bianco. Miisa 31 ireo sivily nofanina ho mpanao famotorana tany Moramanga. Hafahafa ihany ilay fanandramana satria eran-tany dia olona nahavita fianianana ary koa manana fahaizana manokana momba ny “police judiciaire” izay vao afaka manao fanadihadiana.
Teo am-pijerena valim-panadinana bakalorea no mbola nisy nanendaka ihany ireo mpianatra tao amin’ny lisea Rabemananjara ao Toamasina. Vaky hatramin’ny lohan’ireo ary tsy vitan’izay fa mbola lasa koa ny moto sy ny kitapo. Ambony loatra ny tahan’ny tsy fandriampahalemana ao Toamasina, hany ka na toerana be olona aza dia mbola sahy hatrany ny olon-dratsy ny manatontosa ny asany.